Kabtanka Manchester United Harry Maguire Oo Qarka U Saaran Yahay Inuu Sii Joogo Kooxda Xagaagan.
HomeWararka CiyaarahaKabtanka Manchester United Harry Maguire oo Qarka u saaran yahay inuu sii joogo kooxda xagaagan.
June 22, 2022 Wararka Ciyaaraha 0
Kabtanka Manchester United Harry Maguire ayaa lagu soo waramayaa inuu qarka u saaran yahay inuu sii joogo kooxda xagaagan.
Ka dib olole niyad jab leh oo 2021-22 ah oo uu la qaatay Red Devils, 29-sano jirkaan mustaqbalka Old Trafford ayaa su’aal la geliyay, iyadoo tababaraha cusub Erik Ten Hag la fahamsan yahay inuu wadahadallo xun la yeeshay daafaca isagoo ku saabsan booskiisa kooxda.
Si kastaba ha ahaatee, Daily Mail ayaa sheegeysa in Ten Hag uusan qorsheyneynin inuu u ogolaado Maguire inuu ka tago kooxda xagaagan, waxaana uu u arkaa mid ka mid ah daafacyadiisa dhexe ee Raphael Varane iyo Victor Lindelof .
Warbixinta ayaa intaa ku dartay, si kastaba ha ahaatee, in Maguire uu lumin karo kabtanimada inkastoo uu doonayo inuu sii haysto calaamada xilli ciyaareedkii seddexaad oo isku xigta.
Maguire, oo ay seddex sanno uga hartay qandaraaskiisa, ayaa United u ciyaaray 144 jeer tan iyo markii uu kooxda ugu soo biiray 85 milyan ginni 2019, oo ay ku jiraan 37 kulan oo tartamada oo dhan ah xilli ciyaareedkii hore.